မြန်မာ့အရေး အာဆီယံချဉ်းကပ်ပုံအပေါ် ကမ္ဘောဒီးယားသတင်းသမားအမြင်
ဦးကျော်ဇံသာ ။. ။ ဒီကနေ့မှာပဲ အာဆီယံအလှည့်ကျ ဥက္ကဌဖြစ်တဲ့ ကမ္ဘောဒီယားနိုင်ငံ မှာ ပြု့လုပ်မဲ့ အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများ ရဲ့ Retreat ခေါ်တဲ့ အစည်းအဝေးမှာ မြန်မာနိုင်ငံ ကိုယ်စားလှယ် မပါပဲနဲ့ ဒီကိစ္စကို ဘယ်လိုကိုင်တွယ် ဆွေးနွေးကြမလဲဆိုတာ နဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ အာဆီယံအရေးကို နှစ်ပေါင်းများစွာ စောင့်ကြည့်လေ့လာခဲ့တဲ့ ဗွီအိုအေ ခမာဌာနက အယ်ဒီတာ Kimseng Men ကတော့ သူရဲ့အမြင်ကို အခုလိုပြောပါတယ် ။
Kimseng Men (အယ်ဒီတာ ၊ ဗွီအိုအေ ခမာဌာန) ။. ။ မနှစ်က အာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေ အစည်းအဝေးပွဲမှာ စစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်ကို ဖိတ်ခေါ်ပြီး ဘုံသဘောတူညီချက် ၅ ချက်ကို ချမှတ်ခဲ့တာတွေရှိပါတယ်။ အခုနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေ အစည်းအဝေးမှာလည်း ပဋိပက္ခတွေ အဆုံးသတ်ရေး ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတာ ညှိနှိုင်းကြပါလိမ့်မယ်။
ဦးကျော်ဇံသာ ။. ။ ဒါပေမယ့် မြန်မာပြည်သူတွေကရော နိုင်ငံတကာ ကပါပြောနေကြတာက ဒီကိစ္စပြေလည်ရေး အဓိကတွေ့ဆုံရမယ့် ပုဂ္ဂိုလ်က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုနေကြတယ်။ ဒါကြောင့် သူနဲ့တွေ့ဖို့လိုတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီလို တွေ့ဆုံဖို့ဆိုတာကော ဖြစ်နိုင်ပါမလား။ အခုဒီခရီးစဉ်မှာ ။
Kimseng Men (အယ်ဒီတာ ၊ ဗွီအိုအေ ခမာဌာန) ။. ။ ဟုတ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ သိရသလောက်ဆိုရင် စစ်ကောင်စီ အကြီးအကဲကလည်း အာဆီယံဥက္ကဌ ရဲ့ အထူးသံကို ကြိုဆိုဖို့ သဘောတူထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ သူကို မြန်မာနိုင်ငံမှာ တခြားအုပ်စုတွေနဲ့ တွေ့ဖို့ သဘောတူထားပြီလို့သိရပါတယ်။
ဦးကျော်ဇံသာ ။. ။ သူနဲ့ တွေ့ခွင့်မရလည်း အာဆီယံ ကိုယ်စားလှယ် ကိုတော့ စေလွှတ်မှာပဲလို့ ယူဆပါသလား။
Kimseng Men (အယ်ဒီတာ ၊ ဗွီအိုအေ ခမာဌာန) ။. ။ ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ အာဆီယံ ကိုယ်စားလှယ်ဟာ စစ်ကောင်စီကို ဘယ်အထိ စွဲဆောင်နိုင်မလဲဆိုတာကိုပဲ စောင့်ကြည့်ရမှာပါ။ ခုချိန်အထိတော့ စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ ဒါကို သဘောတူမထားဘူးဆိုတာကိုပဲ သိထားပါတယ်။
ဦးကျော်ဇံသာ ။. ။ အဲဒီအထူးကိုယ်စားလှယ်စေလွှတ်မယ့်ကိစ္စက အခုဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးအဆင့် မှာပြီးသွားမှာလား။ ဒါမှမဟုတ် မကြာခင် ကျင်းပမယ့် ထိပ်သီးစည်းဝေးကများ ဆုံးဖြတ်ကြဖို့ရှိမလား။
Kimseng Men (အယ်ဒီတာ ၊ ဗွီအိုအေ ခမာဌာန) ။. ။ ကျနော်စကားပြောဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကျွမ်းကျင်သူတွေရဲ့ အမြင်ကတော့ ဒီဝန်ကြီးအစည်းအဝေးဟာ ကိုဗစ်ကိစ္စအပါအဝင် ဒေသတွင်း စီးပွားရေး နလန်ထူရေး ကိစ္စတွေကို ဆွေးနွေးကြမယ်လို့သိရပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့ ပတ်သက်လို့ကတော့ တရားရုံးမှာ အမှုရင်ဆိုင်နေတဲ့သူနဲ့ တွေ့ခွင့်မပေးနိုင်ဘူးလို့ စစ်ကောင်စီ က ပြောထားတာပါ။ အာဆီယံကိုယ်စားလှယ်က ဘယ်လောက်ဆွဲဆောင်နိုင်မလဲဆိုတာကိုပဲ ကြည့်ရမှာပါ။ ကျနော်အမြင်တော့ ကမ္ဘောဒီယားဝန်ကြီးချုပ် ဟွန်ဆန်း ဟာ သူအခေါ် Soft Approch ခေါ်တဲ့ အနုနည်းချဉ်းကပ်မှုကို ဆက်လုပ်လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် သူဟာ စစ်ကောင်စီအကြီးအကဲနဲ့ အရင်တွေ့ဆုံပြီး သူတို့အနေနဲ့ ကမ္ဘောဒီးယားကို ဘယ်အထိလုပ်ခွင့်ပေးမလဲဆိုတာကို စကားပြောရပါလိမ့်မယ်။
ဦးကျော်ဇံသာ ။. ။ Kimseng ခင်ဗျားဟာ ဒီအရေးကို စောင့်ကြည့်လေ့လာလာတဲ့ ဝါရင့် ခမာဌာနက အယ်ဒီတာ တဦးဖြစ်တယ်။ အဲဒီတော့ ခင်ဗျားရဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအမြင်ကော ဘယ်လိုရှိပါသလဲ။ ကမ္ဘောဒီယားနိုင်ငံဟာ ဒီကိစ္စ အောင်အောင်မြင်မြင်နဲ့ စေ့စပ်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မယ်ထင်ပါသလား။
Kimseng Men (အယ်ဒီတာ ၊ ဗွီအိုအေ ခမာဌာန) ။. ။ ဒီအရေးကို နှစ်ပေါင်းများစွာ စောင့်ကြည့်လာခဲ့တဲ့ ဂျာနယ်လစ်တယောက်အနေနဲ့ ဒီပြသာနာအတွက် ဘာလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ အစီအစဉ်တွေကတော့ စစ်ကောင်စီရဲ့ သဘောအတိုင်းဆိုတာ တွေ့မိပါတယ်။ အထူးသံတမန်ကို ဘယ်သူနဲ့ တွေ့ခွင့်ပေးမယ်ဆိုတာကလည်း သူတို့အပေါ်မူတည်နေပါတယ်။ နောက်ပြီး စစ်ကောင်စီက သူတို့လုပ်နေတဲ့ နည်းလမ်းဟာ ကမ္ဘောဒီယားနိုင်ငံရဲ့ အတိတ်က အတွေ့အကြုံအတိုင်းပဲဖြစ်တယ် ။ အဓိပ္ပါယ်ကတော့ (၁) ဒါဟာအချိန်ယူရမယ့်ကိစ္စဖြစ်တယ်။ (၂) ဟွန်ဆန်ပြောပြောနေတဲ့ အနုနည်း ချဉ်းကပ်မှုကို လက်ခံတယ်ဆိုတာပါပဲ။
မွနျမာ့အရေး အာဆီယံခဉျြးကပျပုံအပျေါ ကမ်ဘောဒီးယားသတငျးသမားအမွငျ
ဦးကြျောဇံသာ ။. ။ ဒီကနမှေ့ာပဲ အာဆီယံအလှညျ့ကြ ဥက်ကဌဖွဈတဲ့ ကမ်ဘောဒီယားနိုငျငံ မှာ ပွု့လုပျမဲ့ အာဆီယံနိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးမြား ရဲ့ Retreat ချေါတဲ့ အစညျးအဝေးမှာ မွနျမာနိုငျငံ ကိုယျစားလှယျ မပါပဲနဲ့ ဒီကိစ်စကို ဘယျလိုကိုငျတှယျ ဆှေးနှေးကွမလဲဆိုတာ နဲ့ ပတျသကျပွီးတော့ အာဆီယံအရေးကို နှဈပေါငျးမြားစှာ စောငျ့ကွညျ့လလေ့ာခဲ့တဲ့ ဗှီအိုအေ ခမာဌာနက အယျဒီတာ Kimseng Men ကတော့ သူရဲ့အမွငျကို အခုလိုပွောပါတယျ ။
Kimseng Men (အယျဒီတာ ၊ ဗှီအိုအေ ခမာဌာန) ။. ။ မနှဈက အာဆီယံခေါငျးဆောငျတှေ အစညျးအဝေးပှဲမှာ စဈကောငျစီခေါငျးဆောငျကို ဖိတျချေါပွီး ဘုံသဘောတူညီခကျြ ၅ ခကျြကို ခမြှတျခဲ့တာတှရှေိပါတယျ။ အခုနိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးတှေ အစညျးအဝေးမှာလညျး ပဋိပက်ခတှေ အဆုံးသတျရေး ဘယျလိုလုပျကွမလဲဆိုတာ ညှိနှိုငျးကွပါလိမျ့မယျ။
ဦးကြျောဇံသာ ။. ။ ဒါပမေယျ့ မွနျမာပွညျသူတှကေရော နိုငျငံတကာ ကပါပွောနကွေတာက ဒီကိစ်စပွလေညျရေး အဓိကတှဆေုံ့ရမယျ့ ပုဂ်ဂိုလျက ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျဖွဈတယျလို့ ဆိုနကွေတယျ။ ဒါကွောငျ့ သူနဲ့တှဖေို့လိုတယျ။ ဒါပမေယျ့ အဲဒီလို တှဆေုံ့ဖို့ဆိုတာကော ဖွဈနိုငျပါမလား။ အခုဒီခရီးစဉျမှာ ။
Kimseng Men (အယျဒီတာ ၊ ဗှီအိုအေ ခမာဌာန) ။. ။ ဟုတျပါတယျ။ ကနြျောတို့ သိရသလောကျဆိုရငျ စဈကောငျစီ အကွီးအကဲကလညျး အာဆီယံဥက်ကဌ ရဲ့ အထူးသံကို ကွိုဆိုဖို့ သဘောတူထားပွီးဖွဈပါတယျ။ သူကို မွနျမာနိုငျငံမှာ တခွားအုပျစုတှနေဲ့ တှဖေို့ သဘောတူထားပွီလို့သိရပါတယျ။
ဦးကြျောဇံသာ ။. ။ သူနဲ့ တှခှေ့ငျ့မရလညျး အာဆီယံ ကိုယျစားလှယျ ကိုတော့ စလှေတျမှာပဲလို့ ယူဆပါသလား။
Kimseng Men (အယျဒီတာ ၊ ဗှီအိုအေ ခမာဌာန) ။. ။ ဒါနဲ့ပတျသကျလို့ကတော့ အာဆီယံ ကိုယျစားလှယျဟာ စဈကောငျစီကို ဘယျအထိ စှဲဆောငျနိုငျမလဲဆိုတာကိုပဲ စောငျ့ကွညျ့ရမှာပါ။ ခုခြိနျအထိတော့ စဈကောငျစီအနနေဲ့ ဒါကို သဘောတူမထားဘူးဆိုတာကိုပဲ သိထားပါတယျ။
ဦးကြျောဇံသာ ။. ။ အဲဒီအထူးကိုယျစားလှယျစလှေတျမယျ့ကိစ်စက အခုဝနျကွီးမြားအစညျးအဝေးအဆငျ့ မှာပွီးသှားမှာလား။ ဒါမှမဟုတျ မကွာခငျ ကငျြးပမယျ့ ထိပျသီးစညျးဝေးကမြား ဆုံးဖွတျကွဖို့ရှိမလား။
Kimseng Men (အယျဒီတာ ၊ ဗှီအိုအေ ခမာဌာန) ။. ။ ကနြျောစကားပွောဖွဈခဲ့တဲ့ ကြှမျးကငျြသူတှရေဲ့ အမွငျကတော့ ဒီဝနျကွီးအစညျးအဝေးဟာ ကိုဗဈကိစ်စအပါအဝငျ ဒသေတှငျး စီးပှားရေး နလနျထူရေး ကိစ်စတှကေို ဆှေးနှေးကွမယျလို့သိရပါတယျ။ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျ နဲ့ ပတျသကျလို့ကတော့ တရားရုံးမှာ အမှုရငျဆိုငျနတေဲ့သူနဲ့ တှခှေ့ငျ့မပေးနိုငျဘူးလို့ စဈကောငျစီ က ပွောထားတာပါ။ အာဆီယံကိုယျစားလှယျက ဘယျလောကျဆှဲဆောငျနိုငျမလဲဆိုတာကိုပဲ ကွညျ့ရမှာပါ။ ကနြျောအမွငျတော့ ကမ်ဘောဒီယားဝနျကွီးခြုပျ ဟှနျဆနျး ဟာ သူအချေါ Soft Approch ချေါတဲ့ အနုနညျးခဉျြးကပျမှုကို ဆကျလုပျလိမျ့မယျထငျပါတယျ။ ဒီအတှကျ သူဟာ စဈကောငျစီအကွီးအကဲနဲ့ အရငျတှဆေုံ့ပွီး သူတို့အနနေဲ့ ကမ်ဘောဒီးယားကို ဘယျအထိလုပျခှငျ့ပေးမလဲဆိုတာကို စကားပွောရပါလိမျ့မယျ။
ဦးကြျောဇံသာ ။. ။ Kimseng ခငျဗြားဟာ ဒီအရေးကို စောငျ့ကွညျ့လလေ့ာလာတဲ့ ဝါရငျ့ ခမာဌာနက အယျဒီတာ တဦးဖွဈတယျ။ အဲဒီတော့ ခငျဗြားရဲ့ ပုဂ်ဂိုလျရေးအမွငျကော ဘယျလိုရှိပါသလဲ။ ကမ်ဘောဒီယားနိုငျငံဟာ ဒီကိစ်စ အောငျအောငျမွငျမွငျနဲ့ စစေ့ပျဆောငျရှကျပေးနိုငျမယျထငျပါသလား။
Kimseng Men (အယျဒီတာ ၊ ဗှီအိုအေ ခမာဌာန) ။. ။ ဒီအရေးကို နှဈပေါငျးမြားစှာ စောငျ့ကွညျ့လာခဲ့တဲ့ ဂြာနယျလဈတယောကျအနနေဲ့ ဒီပွသာနာအတှကျ ဘာလုပျမယျဆိုတဲ့ အစီအစဉျတှကေတော့ စဈကောငျစီရဲ့ သဘောအတိုငျးဆိုတာ တှမေိ့ပါတယျ။ အထူးသံတမနျကို ဘယျသူနဲ့ တှခှေ့ငျ့ပေးမယျဆိုတာကလညျး သူတို့အပျေါမူတညျနပေါတယျ။ နောကျပွီး စဈကောငျစီက သူတို့လုပျနတေဲ့ နညျးလမျးဟာ ကမ်ဘောဒီယားနိုငျငံရဲ့ အတိတျက အတှအေ့ကွုံအတိုငျးပဲဖွဈတယျ ။ အဓိပ်ပါယျကတော့ (၁) ဒါဟာအခြိနျယူရမယျ့ ကိစ်စဖွဈတယျ။ (၂) ဟှနျဆနျပွောပွောနတေဲ့ အနုနညျး ခဉျြးကပျမှုကို လကျခံတယျဆိုတာပါပဲ။
အာဆီယံအဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးတွေ အစည်းအဝေးမြန်မာစစ်ကောင်စီ အကြီးတန်းတာဝန်ရှိသူတဦး တက်ရောက် (ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံခြားရေးဌာန)
မြန်မာ့အရေး အာဆီယံ ချဉ်းကပ်ပုံအပေါ် အကဲခတ်တွေအမြင်
အာဆီယံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအစည်းအဝေးကိစ္စ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့နဲ့ နိုင်ငံကြီးတချို့ကို စစ်ကောင်စီပြစ်တင်ဝေဖန်